KTM Duke-monina Supermoto nisafo! - Overdrive | Môtô Mandamina amin'ny fepetra arahana, sary, naoty, hevitra sy ny discusssions
Home → KTM → KTM Duke-monina Supermoto nisafo! - Overdrive
19 Jun 2015 | Author: Dima | Comments Off amin'ny KTM Duke-monina Supermoto nisafo! – Overdrive
KTM Duke-monina supermoto nisafo!
Ity sary iray supermotard mazava miorina amin'ny KTM Duke sehatra iray efa miseho eo amin'ny Eoropeana KTM Forum. KTM Filoha Tale Jeneralin'ny Stefan Pierer matetika niteny ny orinasa tetikasa amin'ny Bajaj Auto manambara ny nakeds (efa nivoaka), ny fanatanjahan-tena bisikileta (avy any Auto Expo tena mety) ary ny enduro bisikileta (Azo inoana fa tara 2014 na tany am-boalohany 2015). Fa ny supermotard mbola tsy voalaza.
Ara-tantara ny endrika supermotard dia matsiro CONFECTION teraka avy amin'ny an-dalambe koa ny kodia (mandeha avy amin'ny spoked 21 anoloan'ny / 19 aoriana any amin'ny iray firaka 17 mirefy napetraka), kodiarana sy ny lehibe kokoa anoloan'ny notapahiny ny maloto bisikileta. Nihazakazaka izy ireo amin'ny anjara-loto sy ny anjara-Lalantara taranja. Izy ireo koa dia hita fa miavaka an-drenivohitra demonia mampiasa ny mahia lafiny, avo seza sy ny fiovana hatrany fahaizana fiantraikany lehibe.
KTM Duke-monina supermoto
Koa nahoana no KTM manao ny Duke supermotard? Voalohany fa mora ny hanaovana. Raha toa ianao efa am-piasana tamin'ny iray enduro ianao efa nahazo ny ankamaroan'ny asa nandamina ny fampiatoana avy.
Swap ny kodia, kodiarana sy ny freins, ary ianao hametraka. faharoa, India no hita hatreto ny tafahoatra fisalasalany handray mandany vola roa-dalana eny môtô ary koa ny moto izay mitovy izy ireo mety ho eny-roaders. Fanelezana ny mety manerana roa mitovy hanao sy injeniera fotsiny modely tsara ho raharaham-barotra.
Raha mijery akaiky ny sary ianao mamantatra ny sasany fitoviana eo loham-pirenena sy ny supermoto
Raha mijery akaiky ny sary ianao mamantatra ny sasany amin'ireo antsipiriany. Ny bisikileta dia mazava tsara ihany manao ny boriboriny manodidina toy ny olona isika handeha amin'ny Duke izany amin'ny famokarana endrika manantena aho ny hahita toy izany koa MRF / Metzeler kodiarana toy ny loham-pirenena. Na izany aza USD fork anoloana dia mazava intsony bebe kokoa Travel sy toy ny vovoka-bisikileta fomba Mpiaro fork.
Tsy tena mazava fa mijery toy ny mamily rafitsary dia nanalefaka somary ihany koa.
Ny bodywork ahazoan'ny tsara kokoa ny loto bisikileta raha ny iray ihany no mazava tsara trellis rafitra hita maso. Izao bisikileta ny tondro dia mitovy amin'ny Duke sy ny endriky ny mazava ny lohany fairing mijery izany ho toy ny Duke. Mitovy koa ny fitaratra, misaintsaina, ambaratonga sy ny switchgear.
Ny handlbar Toy izany koa fa manana lehibe kokoa ny fiakaran'ny manenjana.
Mariho ny ela fisaka fanaovam-panavotana izay efa mihazakazaka ny handlebar - izany zava-dehibe eo amin'ny famelana ny mpitaingina mba hametraka ny, na ny lanjany eo amin'ny moto mba hahatonga ny tena na inona na inona vahana tsy ampy.
Tamin'ny indray misy rambony LED kely mazava ary inona no tahaka ny setroka aftermarket nitombo be dia be eo amin'ny vovoka sy manefy ny fomba bisikileta-singa. Ny fotsy mono dona aoriana dia hanana Travel bebe kokoa ihany koa. Fa izy ireto no potika ihany ny.
Ny tena be ranony kely dia ny vaovao fiolahana swingarm izay mitondra mankany ambony mitaingina haavon'ny ankapobeny ary koa ny lehibe lavitra tany fangatahany fahazoan-dalana.
Inona izany dia midika ihany koa dia ny hoe raha fijerin'ny sy sary an-tsaina ny lehibe kokoa anoloan'ny spoked kodia, kely aloha kapila sy ny lehibe kokoa (koa spoked) kodiarana aoriana amin'ny knobblies, Afaka ny hahazo ny fahatsapana ny zavatra ho avy ny enduro moto ho eo amin'ity sehatra mety mitovy.
Ny zavatra iray hafa dia midika fa ny olona roa, fara fahakeliny amin'ny OVERDRIVE vao hametraka ny drafitra mba hividy ny Duke sy RC390 amin'ny mihazona ny mipetraka sy miandry ny KTM 390 SM hatao nanomboka.
Dubai: Feno miaraka ny anakà – KTM Middle East fandefasana ofisialy…
2014 KTM 1290 SuperDuke R: MD Voalohany Ride -…
KTM 690 Enduro R, dia nanomana famoriam-bahoaka Cheddar Gumtree
Bike mpitaingina bisikileta vovoka Motocross News Magazine
2009 KTM 990 Supermoto T môtô famerenana @ Top S ...
Honda DN-01 Automatic Sports Cruiser Concept môtô Honda Dream Kids Dokitto Suzuki B-nitranga fahiny Final Mpanjaka Moto Guzzi 1000 Daytona tsindrona Honda DN-01 Harley Davidson XR- 1200 Concept Smart eScooter KTM 125 Foko Concept Indian Chief Classic Honda X4 Low Down Bajaj Discover Suzuki Colleda CO MV Agusta 1100 Grand Prix Ao amin'ny môtô Honda Royal Enfield Bullet 500 Classic Ducati 60 Bike Kawasaki er-6n Suzuki AN 650 Ducati Desmosedici GP11 Honda Goldwing M1 nitranga fahiny Ducati Diavel Suzuki B King Concept Aprilia Mana 850 Bike Kawasaki Four Square Brammo Enertia